Tag Dadweynaha, Isku-dhafka Dib-u-Noqodka, Shirkadaha Dabka ee Dadweynaha oo La Heli Karo
Tagitaanka dadweynaha waa hab fudud oo lagu iibinayo saamiyada saamiyada, oo markii hore si gaar ah loo haystay, loo siiyay xubnaha bulshada guud. Hawshu waa mid dhib badan, si adag loo nidaamiyay waxayna leedahay faa iidooyin badan, adoo ka qaadaya shirkaddaada dadweynaha:
Waxay kaa caawineysaa inaad si dhakhso leh ugu kobciso shirkaddaada adiga oo ku siinaya ilo dhaqaale oo dheeri ah.
Waxay kaa caawineysaa inaad soo jiidato oo aad ku ilaaliso dadka aadka u sarreeya ee leh mushahar macquul ah (iyada oo loo marayo xulashooyinka saamiyada).
Si dhakhso leh ugu kobci shirkaddaada adiga oo soo jiidanaya agaasimeyaal agaasime aqoon leh, khibrad leh.
Dhaqso ugu uruuri caasimada si dhakhso ah kharash yarna.
Waxay kordhisaa isu-imaatinka adiga iyo maal-gashadeyaashaada.
Waxay duuduub ku abuurtaa waxayna abuurtaa saami suuq la adeegsan karo oo loo isticmaali karo in lagu iibsado shirkado kale laguna sameeyo ganacsi istiraatiiji ah shirkadaha kale.
Waxay kordhisaa heerkaaga koritaanka adoo kordhinaya awoodaada aad ugu tartami karto qandaraasyada waaweyn.
Si dhakhso ah oo macquul ah u soo jiidi kartaa qiimaha shirkaddaada.
Waxay awoodaa inaad maalgashi ku sameysato ganacsigaaga adoo ka dhigaya mid aad u qiimo badan, sidaas darteedna kordhinaysa ROI-gaaga shaqsiyeed.
Waxay kordhisaa heerka ganacsigaaga taas oo sahlaysa in la soo jiito ganacsi cusub.
Haddii aad hore u leedahay shirkad dawladeed waxaan kaa caawin karnaa kordhinta qiimaha shirkaddaada iyo macaashka iyo waxaan kaa caawin karnaa inaad ka ilaaliso hantida dacwadaha.
Maskaxda Ku hay; kaliya maahan lacag aruurinta. Waxay sidoo kale ku saabsan tahay xaqiijinta taas
shirkadda si fiican ayey u maamushaa una maamushaa. Maamulayaasha sare waxay u shaqeeyaan faa iidada
saamilayda Maskaxdooda ku hay maskaxda isla markaana waxay dareemi doonaan ujeeddadaada oo dad badan ayaa soo jiidan doona ururkaaga. Waa aragtida fog ee muhiimka ah ee ma aha hal mar oo la toogto. Waxaad u baahan tahay shirkad qaabeysan, qaab qorshe ganacsi oo wanaagsan iyo dad aqoon leh oo fulinaya. Haddii aad joogtid Mareykanka, Jarmalka, Shiinaha, Kanada ama meel kale, ka codso caawimaad.
Maxaad u baahan tahay caawimaad?
Ma dooneysaa inaad kordhiso iibkaaga?
Ma u baahan tahay inaad qiimahaaga hoos u dhigto?
Ma waxaad dooneysaa inaad hesho ganacsiyo kale oo aad ubaahantahay inaad hesho musharixiin wanaagsan?
Ma u baahan tahay qorshe ganacsi oo wanaagsan?
Ka waran xayeysiinta iyo suuq geynta? Ma u baahan tahay caawimaad?
Ma u baahan tahay nidaam taageero wanaagsan iyo liistada dadka aqoonta u leh?
Ka waran kahortaga dadka "gaabin" saamiyadaada?
Marabtaa inaad ganacsi la sameyso shirkadaha S&P 500?
Ma waxaad dooneysaa inaad magacaaga meel uga baxdo dadweynaha hab dhaqan-gal ah?
Ma waxaad dooneysaa inaad ka degto go'yaallada casaanka oo aad u dhaqaaqdo is-weydaarsi weyn?
Waa tan sida loo bilaabayo
Waxaa jira qorshe halkaas oo aad ku maalgelin karto hannaanka “socodsiinta dadweynaha.”
Visa, MasterCard, American Express iyo Discover iyagana waa la aqbalaa.
Hawsha ayaa waliba ku siin karta inaad hesho helitaan $ 50,000 amaah amaah ah hal maalin gudaheed (waxay kuxirantahay ogolaanshaha amaah-bixiyeyaasha) iyo,
Amaaho badan oo waaweyn waxay kuxirantahay hantida iyo qulqulka lacagta haddii qaliinkaagu kaco iyo
Xaaladaha badan, waxaan u diyaarin karnaa Venture Capitalists inay maalgeliso nidaamka socodka dadweynaha iyadoo kuxiran aragtidooda shirkadahooda.
Mar alla markii aad shirkaddaada u qaadatid dadweynaha waxa jira koox tixraacyo ah oo aannu diyaarinnay si aan kor ugu qaadno heerkaaga guusha. Waxaa jira dad aan xiriir dhow la leennahay oo aan u adeegsanno ama aan u adeegsan karno shakhsi ahaan oo aan si wanaagsan ula shaqeynay shirkadaha kale. Waa tan liiska qayb ahaan:
Wakiillada xayeysiinta ee yaqaana waxa natiijada ugu wanaagsan ka hela qiimaha ugu hooseeya.
La taliyayaasha suuq geynta
Ku takhasusay isku biirista alaabada
Kuwaas oo kaa caawin doona inaad horumariso heshiisyo ganacsi shirkadaha S&P 500
Waxaan ku jirnay meheradda in ka badan 100 sano
Xisaabinta khibrada. Tagitaanka dadweynaha waa geedi socod nidaamsan. Marka, waxaad rabtaa inaad ku tiirsanaato kuwa ku caawiya. Waxaa muhiim ah in la dareemo kalsooni inay yaqaanaan insulinta iyo wixii ka soo baxa geedi socodka iyada oo loo marayo khibrad balaaran. Kooxdayadu waxay ku takhasustay ka shaqaynta gudaha xududaha sharciyada nabadgeliyada waxayna yeeleen dariiqa sifiican u lebbisan dhaqso badan oo guul leh.
Waa kuwan qaar ka mid ah faa'iidooyinka loogu talagalay qof go'aansaday inuu bulshada u tago:
Waxay dillaacdaa maal iyo dareere
Waxay kordhisaa qiimaha ganacsiga.
Way fududahay in kor loo qaado raasamaal markii aad leedahay shirkad dawladeed.
U adeegsan kartaa saamiyada inay ku bixiso adeegyada sida xayeysiinta, xayeysiinta alaabada, kale
adeegyada iyo saamiyada shirkadaha kale.
Way fududahay in la helo shirkado kale - adoo ku iibsanaya shirkadda saamiyada.
Wararka ku saabsan Go aan Dadweynaha
Bixinta Tooska ah ee Dadweynaha (DPO) waxaa laga yaabaa inay leedahay faa iidooyin weyn xagga IPO. IPO waa in ay ku dhawaaqdaa inta ay shirkadu ku soo kordhinayso iibinta saamiyada. Haddii qaddarkaas aan la soo kicin, bixintiisu ma dhammaysan karto. Si kastaba ha noqotee, marka loo eego DPO ma jiraan xayiraad la mid ah oo waxaa jira dabacsanaan badan maxaa yeelay looma baahna inaad sare u qaaddo qaddarka raasamaal ee aad u soo jeedinayso hadiyaddaada sida aad adigu ku yeelan lahayd IPO.
Marka, haddii aad qorsheynaysid ama aad ka sii fekereyso inaad dadweyne aado, oo aad rabto inaad ogaato wax badan oo ku saabsan sida hawsha diiwaangelinta ee loo yaqaan 'SEC' ay u shaqeyso, oo ay kujirto isu imaatin dadweyne ama mid noqoshada, soo buuxi foomka dhanka midig qof ayaa kaala hadli doona tan. Waan arki karnaa inta aad rabto iyo sidoo kale goorta aad rabto inaad bilowdo kor u qaadis raasamaal. Weydii sida ay dadweynaha u dhex marayaan oo aad wax uga waydiiso ku biirinta soo noqoshada. Caawinaad ayaa laga heli karaa calaamadaha meelaynta gaarka ah (PPM) iyo sidoo kale
helitaanka caasimada, abuur bilow, suuq sameeyeyaal, shirkado qolof leh iyo sida shirkadaada looga qaado shacabka. Macluumaadka ku saabsan sida kor loogu qaado raasumaal ahaan shirkad dowladeed oo sharci iyo anshax ah ayaa sidoo kale la bixiyaa.
Marka shaqada oo dhan la dhammeeyo, meheraddaadu waxay noqon kartaa mid dadweyne oo ganacsigaguna, sidaas darteed, wuxuu noqonayaa shirkad dadweyne. Waxaan gacanta kuugu qabanaynaa oo waxaan kugu dhex socona jidka koorsada ah talaabo talaabo talaabo talaabo ah ee loo qaadayo nidaamka noqoshada shirkad dowladeed oo laga ganacsado. Shaqaalahayaga kaalmaynta ee xirfadlayaashu sidoo kale waxay kugula socodsiin karaan cusboonaysiinta sida loo sameeyo iskudhac ku biirid shirkad dukumiinti lagu iibiyey oo ay dadweynuhu ka ganacsadeen. Mid ka mid ah dadweynaha ayaa u gudbi kara isku biiritaanka shirkad shaashad dadweyne. DPO, si kastaba ha noqotee, sida caadiga ah, ayaa ah doorashada ugu doorbida badan dadka.
Dadweynaha Ugu Tag Si Hordhac Ah Oo Xiriir Maalgashi iyo Maalgashi Loogu Sameeyo
Xiriirinta maalgashiga ee saxda ah waxay leeyihiin ujeedo faa'iido leh, ujeeddo sharciyeed, iyo damac nabadeed. Marka, shirkadeena ayaa kaa caawin karta inaad si sax ah ula xiriirto maalgashadayaasha oo aad kor u qaaddo saamiga. Si ka duwan shirkadaha gaarka loo leeyahay, shirkad dowladeed oo sida saxda ah loo xareeyay waxay hadda ku xayeysiisan kartaa jihooyinka tooska ah ee xubnaha bulshada.
Shirkaddaada dadweynaha waxaan kaa caawin karnaa inaad mas'uul ka noqotid oo aad kor u qaaddo raasumaalka ganacsigaagu u baahan yahay dhaqso iyo sharci.
Waxaan kaa caawin karnaa inaad sare ugu qaaddo meheraddaada dhagaystayaal waaween ka badan kuwii aad weligaa hore u heshay.
Waad uga ganacsan kartaa saamiyada adeegyada xayeysiinta. Markaa waad adeegsan kartaa xayeysiiskan bilaashka ah waxaadna u isticmaali kartaa inaad aduunka u sheegto inaad tahay shirkad dadweyne. Dad badan ayaa wax ka ogaan doona adiga sidaas darteed dad badan ayaa wax ka iibsan doona. Tani waxay kaa caawin doontaa raadintaaga kor u qaadida raasamaal sababta oo ah maal-gashadeyaal badan ayaa ogaan doona saamiga shirkadaadu u leedahay ganacsiga.
Geeddi socodka Dadweynaha ee Socda
Dadka intooda badani ma yaqaanaan sida ay dadku u socdaan. Marka, waxaan u fududeyneynaa. Erayada sida bixinta tooska ah ee dadweynaha, bixinta bilowga dad weynaha waa la yaqaan laakiin qaar yar ayaa yaqaana faahfaahinta sida loo tago halkaas. Maxuu yahay suuq sameeye? Sidee ugufiican ee aad ugu biiri kartaa midowga soo celinta? Kordhin caasimada? Samee shirkad dadweyne oo qolof leh? Kuwani waa su'aalaha aan ka jawaabno kuwanuna waa adeegyo la bixin karo ka dib markaad soo wacdo.
Mid ka mid ah tillaabooyinka ugu horreeya waa buuxinta foomka diiwaangelinta S-1 oo laga fayl gareeyo
Gudiga Amniga iyo Isdhaafsiga (SEC). Mar haddii ay oggolaadaan xereynta, dukumiintiyada waxaa loo gudbiyaa FINRA, Hay'ada Maareynta Maaliyadeed ee Maaliyadeed. Ahmiyadaha iyo habraacyada leh nidaamka IPO iyo DPO waxaa loo maamuli doonaa hab xirfad-yaqaan ah iyo sidoo kale hanaannada mideynta qolofka, xaraynta 15c211 feylasha iyo sameynta 8-K. EDGAR, oo u taagan aruurinta Macluumaadka Elektiroonigga ah, Falanqaynta, iyo xareynta dib u soo celinta ayaa si sax ah loo dhammeystirey si shirkadda shirkadleyda loo yaqaan 'qolofka' loo yaqaan 'isku-darka', isku-beddelka ayaa si habboon u dhacaya oo raasumaalka bilowga ah ama maalgelinta kobcinta ayaa si guul leh kor loogu qaadaa.
Sidaan horeyba ugu soo sheegnay qormada, habka ugu doorbida badan ayaa ah DPO (Toosinta Dadweynaha Tooska ah). Xiriir la samee oo waxaan ku siin karnaa macluumaad bilaash ah oo ku saabsan mowduucan iyo sidoo kale sida loo sameeyo ku biiritaanka shirkad dadweyne oo qolofta leh. Sidaa daraadeed, waad baran kartaa sida shirkadaada loo qaado dadweynaha iyada oo aan la bixinin kharashkii caadiga ahaa. Intaa waxaa sii dheer, waxaad ka heli kartaa talo bixinno ku saabsan sida shirkaddaada loo qaado dadweynaha iyo sababta ay aad ugu fududahay in kor loo qaado raasamaal iyadoo la adeegsanayo shirkad dadweyne oo ka soo horjeedda mid gaar loo leeyahay.
Ku Dhiirrigelinta Kaydkaaga - Ma Jiraan Wax Ka Wanaagsan Sheeko Wanaagsan
IPO wanaagsan ayaa ah iibinta sheekadaada. Muhiimad ahaan, iibinta wanaagsan ayaa badanaa wanaagsan
sheeko-wadaag, miyaanad ogolayn? Tallaabooyinka ugu horreeya ayaa ah inaad dhowr maalmood ka shaqeyso sheekada. Waxaa maamula dadka kale. Tan xigta, halkii aad ka xorayn lahayd isla fikradadi hore, si isdaba joog ah u cusbooneysi sheekadaada. Dadku waxay ku iibsadaan caadifad waxayna u sababeeyaan go'aamadooda si macquul ah. Hubso inaad ku dartid labadaba faham macquul ah oo macno samaynaya iyo qiiro qiiro leh oo u horseedda molecules maalgashadayaasha inay guuraan. Sheeg sheeko dadka ka dhex hadli doonta.
Sheekada Ugu Wanaagsan
Runtii waxaa jira hal sheeko oo keliya oo loo sheego koox ka mid ah maalgashadayaasha IPO: Sidee bay shirkaddaadu uga dhigaysaa inay ka dhigaan lacag ka badan kan xiga? Inta badan saraakiisha shirkadaha iyo xubno badan oo ka tirsan guddiga ayaa u adeegsada soo bandhigida macaamiisha. Laakiin, maskaxda ku hay, in waxa muhiimka u ah macmiilku inuu ogaado iyo waxa maal gashanaya doonayo inuu ogaado uu inta badan ka duwan yahay. Marka, marka lagu daro ka hadlida badeecadaada iyo waxa aad ku sameyn karto iyaga, marka aad lahadleyso maalgashadayaasha, ka hadal ROI-du.
Waxaad Qortay Sheekada
Waad caawin kartaa, laakiin aakhirka, sheekada waa inaad adigu qortaa. Tani waa shaqada maamulaha guud ama CFO. Si loo celiyo, dadku waxay ku iibsadaan niyad ahaan waxayna u sababeeyaan iibsiga si macquul ah. Marka, haddii sheekada labadaba ay macno sameyso oo ka soo baxdo qalbigaaga, oo sidaas micno weyn kuu leh oo dhab ah adiga, dhagaystayaashaada ayaa dareemi doona tan, waxaa loo dhaqaajin karaa shucuur ahaan ficil, waxayna si fudud u caddeyn karaan go'aankooda.
Waxaan la shaqeynay laba shirkadood oo labaduba ku jiray warshadaha teknolojiyada sare. Mid ka mid ah maamulayaasha ayaa gubay saliida saqdii dhexe diyaarinta soo jeedin macno leh oo qalbi furan. Maamulaha shirkada kale wuxuu lahaa dadka suuq geynta u sameeya bandhiga. Qurbaannadii waa la soo bandhigay waana la qiimeeyay maalin gooni ah. Midkii ugu horreeyay, oo ah halka uu Agaasimuhu qalbigiisa ku soo bandhigayo, ayaa aad uga sarreeyay heerka qiimaha la saadaaliyay. Kii labaadna wuxuu sii joogay hoose. Sabab wanaagsan ayaa jirta oo tan jirta.
Haddii aad waligaa ku aragtay isbadalada bilowga ah ee TV-ga "American Idol", halkaas oo garsoorayaashu ay u arkaan mid heeso qaadaya midba midka kale, waxaad aragtay in Simon Cowell uu neceb yahay markii musharrax lug ku labisanayo dharka labiska ama uu isticmaalayo waxyaabo kale oo gimmick ah. Waxay raadinayaan hibo aan ahayn hype.
Maalgashadayaasha hay'addu waa isku mid. Waxay arki karaan shan ilaa toban hindise maalgalin oo cusub maalin kasta usbuuca. Way wada arkeen. Muddo ka dib waxay noqdaan kuwa cuqdad leh oo shakisan waxayna u baahan yihiin inay kala saaraan dhagaxa badan ee aan qiimaha lahayn si loo helo nuggets yar oo dahab ah. Phony hyperbole ma caawinayso. Furaha ayaa ku jira daqiiqadaha ugu horreeya ee bandhiggaaga. Taasi waa goorta inta badan go'aan gaari doonaan. Ku dhowaad sida muhiimka ah waa daqiiqadihii ugu dambeeyay ee 10-15 inta lagu gudajiray wejiga iyo jawaabta. Maalgashadeyaashu waxay rabaan inay arkaan sida aad u xajisto marka fikradahaaga si adag loogu loolamayo.
Waa tan su'aal ay weydiiso maamule kasta wadada wadada: "Waa maxay waxaaga ugu weyn
caqabad? ”Si kale haddii loo dhigo," Maxaad haysaa habeenka? "Sida ugu fiican ee looga jawaabi karaa waa inaad qirato welwelkaaga iyo inaad dhagaystayaasha u sheegto waxaad samaynayso si aad u xalliso dhibaatooyinka.
Soojeedintaadu caadi ahaan waa daqiiqadaha 45. Taasi waa waxa kaliya ee aad haysatid. Sidaa darteed, tuur bamka oo u sii durki ugu fiican saddexda daqiiqo ee ugu horreeya. Taasi waxay ka dhigeysaa iyaga inay rabaan inay fadhiistaan ​​oo fiiro gaar ah yeeshaan inta lagu jiro 42 ee soo socda. Maxaad uga duwan tahay?
Waa tan tusaale wanaagsan. Maamulaha guud ee shirkad samaysa nadiifinta aaladda robotic-ka ah ayaa sidan ula hadlaysay koox maalgashadeyaal macquul ah sidan: “Aan ku bilaabo bandhigiisa su'aasha ah, Imisa qof oo maanta jooga weligood dhulka nadiifi? Imisa idinka mid ah ayaa jecel inaad sidan sameysaan? “Sidaada oo kale, waxaa jira malaayiin dad ah oo adduunka oo dhan oo aan jeclayn nadiifinta dhulkooda. ABC Robotics-ka ayaa leh wax soo saar xallinaya dhibaatadaas. ”
Waxaan kaa caawin karnaa wixii ugu dambeeyay ee khuseeya nidaamka IPO (Bixinta Bilowga Dadweynaha), isku-darka dib-u-habeynta, Xeerarka 15c211, Regulation D, socoshada dadweynaha iyo qolalka dadweynaha. Intaa waxaa sii dheer, nala soo xiriir wixii macluumaad ah ee ku saabsan Meelaha Meelaha gaarka loo leeyahay ee Memorandums (PPM), Rule 504, Rule 506, kor u qaadista raasamaal iyo bilawga raasamaal, ilaalinta hantida ka soo baxa dacwadaha, iyo sidoo kale sameynta shirkad cusub ee Mareykanka iyo dibedda.
Farshaxan ayay u tahay. Kordhinta raasamaalku waxay noqon kartaa kacdoon. Waxaan haynaa khariidadda. Baro waxa dhacaya marka shirkad ay dadweynaha u baxdo arag sida ay kuu caawin karto.
Waxaad ka baran doontaa waxyaabo badan oo ku saabsan sida shirkad u noqoto mid dadweynaha u furan waxaadna dareemi doontaa raaxo inaad go'aan ku gaadhsiiso habka saxda ah ee adiga kugu habboon. Marka, si aad u hesho macluumaad dheeraad ah iyo qeexitaanno iyo sidoo kale tillaabooyin wax looga qabanayo midowga soo noqnoqda, midaynta dadweynaha ama bixinta tooska ah ee dadweynaha (DPO), wac nambarka sare ee boggan. Dabcan, macluumaadka halkan ku yaal midkoodna looma tixgelin doono mid sharci ah, canshuur ama tallo xirfadeed kale. Haddii tan loo baahdo adeegyada qareen shati leh iyo / ama xisaabiye waa in la raadsadaa.
Markaad diyaar u tahay inaad dadwaynaha u baxdid, nala soo xiriir. Waxaan shaqeyneynay tan iyo 1906 waxaana caan ku ah adduunka oo dhan hogaamiyaasha sameynta shirkada iyo dadweynaha.